UPDATE: Mareykanka oo duqeyn cirka ah ku dilay madaxii Shirkadda Hormuud ee Degmada Jilib | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Mareykanka oo duqeyn cirka ah ku dilay madaxii Shirkadda Hormuud ee...
UPDATE: Mareykanka oo duqeyn cirka ah ku dilay madaxii Shirkadda Hormuud ee Degmada Jilib
Dhismaha Hormuud Telecom
Jilib (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya, in duqeyn dhinaca cir ah oo gelinkii dambe maanta ah lagu dilay madaxii shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee degmada Jilib.
Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ayaa bartilmaameedsaday beer ku taala Degmada Jilib, xilli uu ku sugnaa Maxamuud Xaaji Salaad, Madaxii Shirkadda Hormuud ee Degmada Jilib.
Saraakiil ka tirsan maamulka shirkadda Hormuud ayaa laanta Af Soomaaliga ee BBC-da u xaqiijiyay dhacdadan, waxayna sheegeen in labo gantaal lagu dhuftay beerta Maxamuud Xaaji Salaad, halkaasna uu ku geeriyooday.
Ilaa iyo haddana ma jirin cid kale oo wax ku noqotay dhacdadaas. lamana oga sababta loo beegsaday Maxamuud Xaaji Salaad.
Dhinaca kale, war Saxaafadeed ka soo baxay Taliska Ciidanka Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in duqayn ay diyaaradahooda galabtii maanta ka fuliyeen Degmada Jilib lagu dilay xubin ka tirsanaa Al Shabaab.
War-saxaafadeed kale oo ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa sidaasi si lamid ah waxaa lagu sheegay in duqayntaasi lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. Labada dhinacba maynaan cadayn magaca shakhsiga lagu dilay duqayntaasi.
Labadan war saxaafadeed waxaa sidoo kale lagu sheegay inaanay jirin waxyeelo dadka rayidka ahi ka soo gaartay duqayntaasi.
Hase ahaatee dadka ku dhaqan Degmada Jilib ayaa soo sheegaya in duqayntii ugu dambeysay ee degmadaasi ka dhacday qofka lagu dilay uu ahaa Maxamuud Xaaji Salaad
Idaacadda Andalus oo afka Shabaabka ku hadasha ayaa fiidkii caawa baahisay inaanay Shabaabka waxyeelo ka soo gaarin weerarkii dhanka cirka ahaa, ee gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Degmada Jilib.
Ugu dambeyn, duqayntan ayaa waxay ku soo aadaysa, xilli Taliska AFRICOM uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka, ee ka dhanka ah deegaanada uu Ururka Al Shabaab ka arrimiyo, tiiyoo ay xilliyada qaarkood waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ah.
Diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn ku dilay madaxii Shirkadda Hormuud
Maxamuud Xaaji Salaad